England tour cut to four matches - Manchester Evening News
ENGLAND have won their battle to avoid rescheduling today's postponed opening one-day international following their delayed arrival in Zimbabwe.
16:13, 26 NOV 2004
Zimbabwe Cricket were keen to move today's match to tomorrow, but England were reluctant to play less than 24 hours after their arrival in Harare.
England and Wales Cricket Board chairman David Morgan emerged from talks with Zimbabwe Cricket president Peter Chingoka to reveal the itinerary has instead been changed to allow a midweek fixture in the capital.
England will now play on Sunday and Wednesday in Harare before playing back-to-back matches in Bulawayo next weekend to complete the series.
"Zimbabwe Cricket were very keen we played tomorrow but we rejected that request because it is unrealistic to expect England to play a one-day international within 24 hours of their arrival here," explained Morgan.
"They were very keen for us to play five matches in eight days and I think four in eight days is itself a hectic schedule.
"Zimbabwe Cricket have indicated they will suffer a significant financial penalty as the result of their being one fewer match. We have made clear we don't think the ECB are liable for that loss."
The ECB agreed to proceed with the tour once the Zimbabwe government's ban on some British journalists entering the country was lifted.
England stayed in South Africa while the 11th-hour discussions over the tour took place but finally flew to the Zimbabwean capital this morning.
They were driven to their hotel in the city accompanied by a small police escort. There were no reports of anti-tour protesters.